China Dimmable LED Na-amụba Ìhè, Aluminom Dummịl na-amụba Ìhè, 12W Mmiri na-adịghị ahụkebe site na-etowanye ndị na-emepụta ihe
Nkọwa:Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto,Mkpụrụ ọkụ Aluminom na-amụba Ìhè,12W Dimmable LED na-eto eto,Mmiri mmiri na-emepụta site na-eto eto,,
Home > Ngwaahịa > LED Plant Grow Light > Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto
2000w Ike Dị Ike Na-amụba Ìhè maka Ugbo  Kpọtụrụ ugbu a
Ugboro abụọ gbanwee 1500w Nke a nwere ike ịmalite  Kpọtụrụ ugbu a
600watt 1200watt 1500watt 2000watt LED na-eto eto  Kpọtụrụ ugbu a
1200W Egwuregwu Egwuregwu zuru ezu CE RoHS LED na-eto eto  Kpọtụrụ ugbu a
Hydroponics 1000w COB akwukwo nri zuru spectrum LED-eto Eto  Kpọtụrụ ugbu a
LED 600W na-eto eto  Kpọtụrụ ugbu a
Dimmable 1000W LED Na-etowanye Light hydroponic  Kpọtụrụ ugbu a
1500W Patent Dimmable Full Spectrum COB LED Grow Light  Kpọtụrụ ugbu a
1000W 1500W 2500W Greenhouse Smart LED na-eto eto  Kpọtụrụ ugbu a
1200W Dimmable Full spectrum COB LED Plant Grow Light  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu zuru ezu 900W LED Na-amụba Ìhè maka Osisi Ugbo / Ugbo  Kpọtụrụ ugbu a
600W Dumble LED Na-amụba Ìhè maka Ụkpụrụ / oge ntoju  Kpọtụrụ ugbu a
WiFi Gateway 2500W Dimmable COB LED Grow Light  Kpọtụrụ ugbu a
2000w Ike Dị Ike Na-amụba Ìhè maka Ugbo
2000w Ike Dị Ike Na-amụba Ìhè maka Ugbo Nkọwa: Mmiri ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ na-eduzi bụ ìhè na-enweghị isi, n'ozuzu ọkụ eletrik, nke e mere iji kpalite osisi eto eto site n'itinye ìhè kwesịrị ekwesị maka photosynthesis. A na-eji ojiji a na-eme...
Ugboro abụọ gbanwee 1500w Nke a nwere ike ịmalite
Ugboro abụọ gbanwee 1500w Nke a nwere ike ịmalite Nkọwa: Mmiri ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ na-eduzi bụ ìhè na-enweghị isi, n'ozuzu ọkụ eletrik, nke e mere iji kpalite osisi eto eto site n'itinye ìhè kwesịrị ekwesị maka photosynthesis. A na-eji ojiji...
600watt 1200watt 1500watt 2000watt LED na-eto eto
600watt 1200watt 1500watt 2000watt LED na-eto eto Nkọwa: Mmiri ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ na-eduzi bụ ìhè na-enweghị isi, n'ozuzu ọkụ eletrik, nke e mere iji kpalite osisi eto eto site n'itinye ìhè kwesịrị ekwesị maka photosynthesis. A na-eji ojiji...
1200W Egwuregwu Egwuregwu zuru ezu CE RoHS LED na-eto eto
Ọnụahịa otu: USD 52.08 / Piece/Pieces
1200W Egwuregwu Egwuregwu zuru ezu CE RoHS LED na-eto eto Nkọwapụta: Model NO.
Hydroponics 1000w COB akwukwo nri zuru spectrum LED-eto Eto
Ọnụahịa otu: USD 43.56 / Piece/Pieces
Hydroponics 1000w COB akwukwo nri zuru spectrum LED-eto Eto Nkọwapụta: Model NO.
LED 600W na-eto eto
Ọnụahịa otu: USD 34.09 / Piece/Pieces
LED 600W na-eto eto Nkọwapụta: Model NO.
Dimmable 1000W LED Na-etowanye Light hydroponic
Patent 1000W LED Na-amụba Ụdị Igwe Mmiri zuru ezu maka Osisi Osisi na Ala • WiFi 3 ọ bụla na-achịkwa agba, njuputa, gbanye / gbanyụọ .Utu akara otu ìgwè nke ọkụ na-eto eto. • 5w nnukwu égbè Epistar na COB chip LED source, diode nwere Zenger na ya...
1500W Patent Dimmable Full Spectrum COB LED Grow Light
Ego 1500W Patent Dimmable Full Spectrum COB LED Grow Light for Plant Factory Nkọwa: Ruo ọtụtụ iri afọ, ndị na-eto eto n'ime ụlọ adaberewo na ihe ọkụkụ na-emepụta ihe dịka HID, High Pressure Sodium, na Fluorescent iji mee ka ìhè anyanwụ dị...
1000W 1500W 2500W Greenhouse Smart LED na-eto eto
1000W 1500W 2500W Greenhouse Smart LED na-eto eto Nkọwa: Ruo ọtụtụ iri afọ, ndị na-eto eto n'ime ụlọ adaberewo na ihe ọkụkụ na-emepụta ihe dịka HID, High Pressure Sodium, na Fluorescent iji mee ka ìhè anyanwụ dị n'ime ime ụlọ. Ma ọ bụ iji...
1200W Dimmable Full spectrum COB LED Plant Grow Light 600w, 900w, 1200w LED Na-amụba Ìhè .Ọ na-eme ka ụlọ ígwè na-edozi ígwè na ihe ọkụkụ dị ọkụ. Dira: COB + 5W nnukwu ike ọkụ. Ọ bara uru maka ime ụlọ. Ndị dị ka anụ ahụ, Dutch osisi, wdg. Ngwa na...
Egwuregwu zuru ezu 900W LED Na-amụba Ìhè maka Osisi Ugbo / Ugbo
Egwuregwu zuru ezu 900W LED Na-amụba Ìhè maka Osisi Ugbo / Ugbo 600w, 900w, 1200w LED Na-amụba Ìhè .Ọ na-eme ka ụlọ ígwè na-edozi ígwè na ihe ọkụkụ dị ọkụ. Dira: COB + 5W nnukwu ike ọkụ. Ọ bara uru maka ime ụlọ. Ndị dị ka anụ ahụ, Dutch osisi, wdg....
600W Dumble LED Na-amụba Ìhè maka Ụkpụrụ / oge ntoju
600W Dumble LED Na-amụba Ìhè maka Ụkpụrụ / oge ntoju 600w, 900w, 1200w LED Na-amụba Ìhè .Ọ na-eme ka ụlọ ígwè na-edozi ígwè na ihe ọkụkụ dị ọkụ. Dira: COB + 5W nnukwu ike ọkụ. Ọ bara uru maka ime ụlọ. Ndị dị ka anụ ahụ, Dutch osisi, wdg. Ngwa na...
WiFi Gateway 2500W Dimmable COB LED Grow Light • WiFi 3 ọ bụla na-achịkwa agba, njuputa, gbanye / gbanyụọ .Utu akara otu ìgwè nke ọkụ na-eto eto. • 5w nnukwu égbè Epistar na COB chip LED source, diode nwere Zenger na ya na-echebe ya, otu LED diode...
China Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto Ngwa
N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ngwaahịa ndị yiri ya na Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto, anyị bụ ndị ọkachamara nke Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto,Mkpụrụ ọkụ Aluminom na-amụba Ìhè,12W Dimmable LED na-eto eto,Mmiri mmiri na-emepụta site na-eto eto,,. Anyị lekwasịrị anya n'ịzụlite ngwaahịa, mmepụta na ahịa. Anyị emeela ka ogo Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto dị mma iji hụ na ngwaahịa ọ bụla na-ebupụ ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa ndị dị na Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto, biko pịa nkọwa ngwaahịa iji lee parameters, ụdị, foto, ọnụahịa na ozi ndị ọzọ gbasara Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto,Mkpụrụ ọkụ Aluminom na-amụba Ìhè,12W Dimmable LED na-eto eto,Mmiri mmiri na-emepụta site na-eto eto,,.
Ihe ọ bụla ị bụ otu ma ọ bụ onye ọ bụla, anyị ga-eme ike anyị niile iji nye gị ozi ziri ezi na nke zuru ezu gbasara Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto!
Ọkụ ọkụ na-eto eto na-eto eto Mkpụrụ ọkụ Aluminom na-amụba Ìhè 12W Dimmable LED na-eto eto Mmiri mmiri na-emepụta site na-eto eto Mkpụrụ ọkụ na-eto eto na-eto eto